Tafaasiil Dheeraad ah oo Ka Soo Baxaya Xilli-kordhintii IGAD ee Barlamaanka Federaalka iyo Dawrka Sh. Shariif. – Radio Daljir
Tafaasiil Dheeraad ah oo Ka Soo Baxaya Xilli-kordhintii IGAD ee Barlamaanka Federaalka iyo Dawrka Sh. Shariif.
Janaayo 31, 2011 12:00 b 0
Addis Ababa, Jan 31 ? Madaxwaynaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa diidmo adag kala kulmay qorshe uu la tagay Addis Ababa, kuna doonayay in loogu kordhiyo xilliga sharciyaddiisa taasoo ku eg dhammaadka bisha August ee sannadkan 2011-ka iyada oo taa baddalkeedana loo oggolaaday in la koridhiyo xilliga golaha barlamaanka federaalka ah oo ku dhex leeyahay kutlad aad u tira badan.
Shir ay Axaddii (30-ka Janaayo) isugu yimaadeen madaxda dawladaha IGAD, kana dhacay magaalada Addis Ababa, ayuu madaxwayne Shariif waxa uu halkaa ka jeediyay warbixin ku aaddan xaaladda ammaanka iyo dib-u-heshiisiinta Soomaaliya. Md. Shariif ayaa warbixintaa kadib madaxda soo hordhigay codsi nuxurkiisu ahaa in la kordhiyo xilliga jiritaanka dawladda federaalka KMG ah.
Ilo-xogeedyo Radio Daljir xiriir la sameeyay ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan hal madaxwayne uu soo jeedintaas qaatay, halka dhammaan madaxde kale ay ka horyimaadeen. Qaar ka tirsan madaxda sare ee midiwga Afrika oo uu ku jiro Jean Ping, shir-guddoonka xoghaynta ururka ayaa madaxwayne Shariif ku dhaliilay fadhiidnimo iyo horu-socod la?aan. Xogtu waxa ay intaa ku dartay in madaxwayne Shariif ugu dambayntii lagu qanciyay in la kordhiyo xilliga barlamaanka, dabadeedna barlamaanka loo daayo in uu go?aan ka gaaro masiirka waaxyaha kale ee federaalka. Madaxwayne Shariif ayaa lagu qanciyay in uu barlamaanka ku leeyahay kutlat u suura-galin karta in ay fidiso sharciyaddiisa.
Heshiiskii Jabuuti ee 2009-kii ayaa la-laba jibbaaray xubnaha uu ka koobanyahay golaha KMG ah ee barlamaanka federaalka Soomaaliya, iyada oo lagu daray 275 xubnood kuwaasoo 200 oo ka mida ay toos uga yimaadeen garabkii ururkii Dib-u-xoraynta (ARS) ee uu guddoomiyaha u ahaa Sheekh Shariif, halka inta kalena ay ka imanayeen ururada bulshada rayidka ah. Doorasha madaxwayne oo kordhintaa kadib la qabtay, laguna soo afjaray heshiiskii Jabuuti ayaa waxa si fudud ugu guulaystay madaxwayne Shariif Sheekh Axmed.
Ammaan Faraha ka Baxay
Tan iyo intii uu hoggaanka federaalka la wareegay madaxwayne Shariif waxa si wayn u wiiqmay awooddii dawladda Federaalka KMG ah ee Soomaaliya iyada oo lumisay inta badan goballadii dalka ee ay gacanta ku hayeen oo ay kala wareegtay kooxda Alshabab. Meelaha ka baxay gacanta dawladda ayaa waxa ugu muhiimsanaa gobolka Shabeellaha Dhexe iyo inta badan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Labada gobolba waxa ku badan taageerayaasha Sheekh Shariif, waana halka uu dhaqan ahaan ka soo jeedo.
Khilaafaad iyo Xiriirro Xumaaday
Sidoo kale waxa muddadaa kooban khilaaf ba?ani dhex maray madaxdii waaxyaha dawladda kaasoo ugu dambayntii keenay in u is casilo ra?iisul-wasaarihii ugu horeeyay ee Sheekh Shariif mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharmarke. Dhinca kalena waxa si isa soo taraysa u soo xumaanayay xiriirka dawladda dhexe ee federaalka iyo tan dawladda Puntland. Khilaafaadka ayaa xooggooda waxa ay salka ku haayeen dhinacyada dhaqan-galinta arimaha federaalka, dhamaystirka dastuurka, khayraadka dalka, deeqaha dibadda iyo kawada tashiga arimaha masiiriga ah ee ummadda Soomaaliyeed. Khilaafkaas ayaa ugu danmbaytii gaaray in ay dawladda Puntland guud ahaaba xiriirka u gooyso dawladda federaalka ee uu hogaaminayo Sheekh Shariif todobaadkii tagay.
Waxa isla muddadaas waxba iska soo tari waayeen xiriir dhex maray dawladda federaalka iyo kooxda Ahlu-Sunnaha Wal-Jamaacah oo ka talisa qaybo ka mida goboollada dhexe ee Soomaaliya, dagaal ba?anna kula jirta kooxda Alshabab.
Heshiiyo Mugdi Badan Ku Jiro
Kordhinta loo sameeyay barlamaanka iyo hanka madaxwayne Shariif ee ah in uu xilliga kororsado isaga oo u maraya barlamaanka ayaa ku soo beegmay iyada oo ay cirka isku sii shareertay xiisad ka taagan dabeecadda iyo mas?uuliyadda heshiis dhex maray dawladda federaalka iyo shirkadda Saracen International. Shalay ayay xukuumadda ra?iisul-wasaare Farmaajo hor keentay barlamaanka caddaymo muujinaya in heshiiskaasi uu ka dambeeyay mas?uulkii ay xilligaa isugu dhawaayeen madaxwayne Shariif, oo ahaa ra?iisul-wasaare-ku-xigeenkii iyo wasiirkii maaliyadda Shariif Xasan Sheekh Aadan, haatanna ah afhayeenka barlamaanka xilliga loo kordhiyay. Waxa jira tuhunno muujinaya in madaxwaynuhu ruuxiisu ku lug leeyahay heshiiskaas, taasoo haddii ay isa soo tarto si wayn u wiiqi karta xiriirka madaxwaynaha iyo barlamaanka uu sida wayn ugu xisaabtamayo.
Lama saadaalin karo jihada ay u socoto siyaasadda Soomaaliya, waxase hubaal ah in todobaadyada soo socda ay marti-galin doonaan dhaq-dhaqaaq siyaasadeed oo la dareemi karo iyada oo la rajaynayo in ay kala miirmaan arrimo mug iyo miisaan leh oo haatan madaxada iskula jira, lana fili karo in ay saamilayda arrimaha Soomaaliya gudo iyo dibadba ay ka gacma-buuxsan doonaan farriinta uga timid Addis Ababa iyo wixii laga yeeli lahaa masiirka rukumada dawliga ah ee Federaalka Soomaaliya.
“Qofkii dambi loo qabto, ama lagu tuhmo, waxaa u soo istaagaysa labaatan kun oo qof oo ay isku reer yihiin” Taliye Qaal.
Fadeexad ku gadaaman heshiisyada madaxda dawlada federaalku ay la galeen sharikaadka ajaanibta ah.